ZayYarHlaing: December 2009
2009 ၇ဲ့ နောက်ဆုံးလက်ဆောင်
2009 ၇ဲ့Last day လက်ဆောင်အဖြစ် Link လေးတစ်ချို့ ကိုမျှဝေပေးခြင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်အသုံးချနေတဲ့ Link လေးတွေထဲကတစ်ချို့ ပါ။
2009 ၇ဲ့နောက်ဆုံးလက်ဆောင်လို့ ဆိုထားမိတော့၊
Lucky လေးလဲဖြစ်သွားအောင် Link ခုနှစ်ခုအကြောင်းေ၇းပေးလိုက်မယ်ဗျာ။
( အမှန်က အများကြီးေ၇း၇မှာပျင်းနေလို့)
NO.1. Flash software ဟာသုံးတတ်မယ်ဆို၇င် ကိုယ်ပိုင်
animation VCD အခွေအထိ ထုတ်ဝေလို့ ၇ပါတယ်။
မ၇ှင်းတာ၇ှိ၇င် tips တွေဖတ်ပြီး FAQ မှာအဖြေ၇ှာပါ။
NO.2. website တစ်ခုကိုဖန်တီးနေတယ်၊ ဒါမှမဟုတ် computer ပေါ်မှာတင်ဖို့ 
Icons လှလှလေးတွေ၇ှာနေတယ်ဆို၇င်တော့ www.deviantart.com ကိုသတိ၇လိုက်ပါ။
GMAIL တို့ လို Mail icon တွေ၊ Music button တွေနဲ့ 
Free account နဲ့ Paid account ဆိုပြီးခွဲထားပေမဲ့၊
Free account မှာတင် down ခွင့်ပေးထားတာတွေက
NO.3. ဘောလုံးပြိုင်ပွဲတွေ၇ဲ့ နောက်ဆုံး update သတင်းတွေ၊
transfer window နဲ့ ပွဲစဉ်အနိုင်အ၇ှုံးခန့် မှန်းမှုတွေ၊
England ဒိုင်များ၇ဲ့ လောင်းကြေးတွေ၊ စတဲ့ဘောလုံးသတင်းမှန်သမျှတွေကိုဖတ်ခြင်တယ်၊
စိတ်ဝင်စားတယ်ဆို၇င်တော့ www.soccerstand.com ကိုသွားကြည့်လိုက်ကြပါ။
NO.4. ၁၉၉၈ ခုနှစ်ထဲက online ပေါ်မှာ၇ှိနေခဲ့တဲ့ဒီ site လေးဟာ
MAC သမားတွေအတွက်ေ၇ာ၊ window သမားတွေအတွက်ပါ fonts မှန်သမျှကို
free download ပေးထားပါတယ်။
အလွန်လှပတဲ့ fonts တွေ၇နိုင်ပါတယ်။
တစ်ခုသတိထားဖို့ လိုတာကတော့ Anti spyware တစ်ခု၇ှိမှသာ
နဲနဲတော့ shot ၇ှိတယ်ဗျာ။စမ်းကြည့်မယ်စိတ်ကူး၇င်တော့
NO.5. Free subdomain တစ်ခုပါ။
အသင့်လုပ်ပြီးသား templates တွေလဲ၇ှိပါတယ်။
20 MB အထိပဲပေးထားပေမဲ့ photo တွေကိုတော့ 500 ပုံအထိတင်ခွင့်ပေးထားပါတယ်။
ထူးခြားမှုတစ်ခုကတော့ fip access ၇နိုင်တဲ့နေ၇ာလေးတစ်ခုဖြစ်နေတာပါ။
NO.6. www.pctools.com/guides computer နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ security တွေ၊
driver install တွေ၊ free download တွေကိုအဲဒီ့နေ၇ာလေးက၇နိုင်ပါတယ်။
လိုအပ်တဲ့အကြံတွေကိုလည်း forums links တွေပေးထားတဲ့၇ယူနိုင်ပါတယ်။
NO.7. computer သမားတစ်ယောက်ဟာ www ကို
ဘယ်သူဖန်တီးခဲ့တယ်ဆိုတာသိထားသင့်သလို၊ www.w3.org ကိုလဲသိထားသင့်ပါတယ်။
w3.org မှခွဲထွက်ထားတဲ့ www.w3school.com
မှာလဲ source codes တွေ၇ယူနိုင်ပါတယ်။
Non-profit ဆိုတဲ့ အခွင့်အေ၇းလုံးဝ၇ယူခြင်းမ၇ှိသော၊
helper site သန့် သန့် လေးတစ်ခုပါ။
( နောက်များမှပဲ မသိသေးသူများအတွက်၇ည်၇ွယ်ပြီး၊
ဒီ Post ကလေးဟာ 2009 အတွက်ကျွန်တော့်၇ဲ့ Last post လေးပါ။
Posted in Computer by Zay Yar Haling |0comments
ဒီနေ့ ဟာ 31.December.2009 ပါ။
ဒီတော့ ဘယ်သောအခါမှပြန်မ၇နိုင်တော့တဲ့ 2009 ၇ဲ့ Last day ပေါ့ဗျာ။
အဲဒီလိုပဲဘယ်သောအခါမှပြန်မ၇နိုင်တော့တဲ့နေ့ တစ်နေ့ ၇ဲ့ 
Last time တစ်မျိုးပြော၇၇င် sunset time ပေါ့ ...၊
အဲဒီလို sunset time ၇ဲ့ အလှအပလေးတွေကိုခံစားကြည့်ခြင်တယ်ဆို၇င်တော့၊
အောက်မှာ Link ဗျာ။
2009 ၇ဲ့ နှုတ်ဆက်လက်ဆောင်လေးအဖြစ်
ကျွန်တော်တို့2009 ကိုနှုတ်ဆက်ကြ၇င်း
2010 ကိုမင်္ဂလာ၇ှိ၇ှိကြိုဆို၇န် ပြင်ဆင်ကြပါစို့ လားဗျာ ...။
Posted in စပ်မိစပ်၇ာ by Zay Yar Haling |0comments
အိမ်မြှောင်ပေးတဲ့ သင်္ခန်းစာ ....
ဒီပုံပြင်က ဂျပန်မှာ တစ်ကယ်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ ဖတ်ရပါတယ်။
တစ်ခါက လူတစ်ဦးသည် အိမ်ပြင်ရန်အတွက် အိမ်နံရံများကို ဖျက်ချခဲ့သည်။
ဂျပန်စတိုင်လ် အိမ်နံရံများသည် အလယ်တွင် ပျဉ်အရင်ခံပြီး ဘေးနှစ်ဖက်ကို
အုတ်ဖြင့် ပြန်စီထားခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုကြောင့် နံရံ အလယ်မှာ
အခေါင်းပေါက်ဖြစ်နေသည်။ သူသည် နံရံကို ဖျက်ချစဉ် နံရံအတွင်းတွင်
အိမ်မြှောင်တစ်ကောင်အား တွေ့မိသည်။ အိမ်မြှောင်၏ အမြီးသည်
သံချောင်းတစ်ချောင်းနှင့် ရိုက်မိနေသည်ကို ထူးဆန်းစွာ တွေ့မိသည်။
မလှုပ်သာ မခံသာ သနားစရာ အိမ်မြှောင်အား ရိုက်မိနေသော သံချောင်းကို
သူသေချာ ကြည့်လိုက်မိသည်။ ထို သံချောင်းမှာ လွန်ခဲ့သော (၁၀)နှစ်
အိမ်ဆောက်စဉ်က ရိုက်ခဲ့သော သံဖြစ်ကြောင်း သူအံသြစွာ တွေ့လိုက်သည်။
(၁၀)နှစ်အတွင်း အိမ်မြှောင်ဘယ်လို အသက်ရှင်ခဲ့သလဲ... မှောင်မဲနေတဲ့
နံရံအတွင်း မသွားနိုင် မလှုပ်နိုင်ဘဲ အသက်ရှင်ဖို့က သိပ်မလွယ်ကူလှပေ။
အိမ်မြှောင် မည်ကဲ့သို့ အသက်ရှင်နေခဲ့သည်ကို သူအရမ်း သိချင်နေမိသည်။
နံရံကို ဆက်မဖျက်တော့ဘဲ (၁၀)နှစ် အတွင်း အသက်ဆက် ရှင်နေသော
အိမ်မြှောင်ကို သူစူးစမ်းခဲ့သည်။ သိပ်မကြာလိုက်ပါ... အစာကိုက်ချီထားသော
အိမ်မြှောင် နောက်တစ်ကောင်ကို သူ တွေ့လိုက်မိသည်။ သူခဏသာ
မင်သက်သွားမိသည်။ (၁၀)နှစ်လုံးလုံး မပျက်မကွက် အစားကိုက်ချီ ကျွေး
မွေးခဲ့သော နောက်အိမ်မြှောင်ဟာ ဒီအိမ်မြှောင်နဲ့ ဘာတော်သလဲ... ဒါဟာ
ဘယ်လို မေတ္တာမျိုးလဲ.... အဲဒီအိမ်မြှောင်ဟာ သူရဲ့ မိသားစုလား...
သူငယ်ချင်းလား... မောင်နှမလား.... ဒါမှမဟုတ်.....
ဒီပုံပြင်ကို ဖတ်မိပြီး ရင်ထဲကို အမည်မသိ ဝေဒနာတခု တိုးဝင်လာခဲ့မိတယ်။
ဒီလောကကြီးဟာ အရာရာ တိုးတက်ပြောင်းလဲ လာသည်နှင့်အမျှ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး
ဆက်သွယ်ဖို့ကလဲ လွယ်ကူ မြန်ဆန်လာခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ဦးအပေါ်တစ်ဦးထားတဲ့
မေတ္တာနဲ့ နားလည်မှုစိတ်တွေကတော့ ဝေး.....ဝေး....ဝေး....လို့။
( ဒီပုံပြင်လေးမှာပါတဲ့ အကောင်ဟာ အိမ်မြောင်လို့ လဲမထင်ဘူး ...
တောက်တဲ့လိုအကောင်မျိုးပဲ ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ထင်တယ် ... ၁၀
နှစ်လောက်အသက်ရှည်တာရယ် .. အမြီးက ပြတ်မထွက်တာတွေ ရယ်ဆိုတာ က
အိမ်မြောင်မှာ မဖြစ်နိုင်ဘူးလေ .. တောက်တဲ့ ပဲဖြစ်ဖို့ များပါတယ် ....
ဒါပေမယ့်ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ်ပါ .. သူ ပေးချင်တဲ့အသိလေးကတော့ ကောင်းပါတယ်ဗျာ )
သူငယ်ချင်း ပို့ပေးတဲ့ ပုံပြင်လေးပါ... ကျွန်တော်တော့
အရမ်းကိုကြိုက်ပါတယ်... သူငယ်ချင်း အားလုံးလည်း
Professional သုံး Digital camera တစ်လုံးလိုခြင်နေတာအတော်ကြနေပြီဗျ။
Nikon D50, Nikon D40, Canon D5000 အစ၇ှိသဖြင့်ပေါ့လေ ...
စတဲ့ camera တွေကိုကျွန်တော်သုံးကြည့်ဘူးပါတယ်။
( သူများဟာတွေကိုကပ်သုံးတာ )
အခုကိုယ်ပိုင် တစ်လုံးမျက်စိမှိတ်ပြီးဝယ်လိုက်တော့မယ်စိတ်ကူးလိုက်တော့ ...၊
ဝေခွဲလို့ မ၇တော့ဘူးဗျာ။ Canon ပဲဝယ်၇မလား ...?
Nikon ပဲဝယ်၇မလား ပေါ့ဗျာ။ အဲဒီလိုစားစ၇ာလေးဖြစ်လာပါလေေ၇ာ...။
ဒါနဲ့Photography site တစ်ခုကို sing up လုပ်၊
အဲဒီကအမေးအဖြေ section ကနေဒီလိုလေးမေးလိုက်မိတယ်ဗျာ ...။
I want to know whats the same level camera that canon has to offer,
on the same level with the Nikon D50.
Also i would like to know which one of those is better and why.
Many people don't like Nikons for some odd reason.
ဒီတော့ပြန်ဖြေပုံလေးကသင်းတယ်ဗျသိလား။ ဒီလို ...။
The choice of Nikon vs Canon isalot like Mac vs Windows.
They both get the job done. Each has it's advantages and disadvantages.
ဌဲ ဌဲ။ မြန်မာစကားမှာ၇ှိတယ်မလား ...၊ စကားကြီး ၁၀မျိုးဆိုတာလေ။
သူပြန်ဖြေပုံလေးက ၁၀မျိုးထဲက ဘယ်တစ်ခုနဲ့ သွားအကျုံးဝင်လဲဆိုတာ
Canon ကလည်းမမုန်း၊ Nikon ကလဲမမုန်း။
ဒီအပြင် Computer Operation system လောကမှာ power အ၇ှိဆုံး
Mac os နဲ့Microsoft os ကိုလဲ ၂ မျိုးလုံးကောင်းပါ၏ လို့ ကြော်ငြာပေးလိုက်သလိုဖြစ်သေး။
စပ်ဆော့ပြီးမေးမိတဲ့ အနော်ပဲ ......
အဲဒါတွေစိတ်နဲ့ မတည့်တာ၊ငါနော် ....
ဆိုတဲ့စကားကိုပဲခဏငှားပြီးသုံးလိုက်၇တော့မယ်ထင်ပါ့သယ်၇င်းတို့ေ၇ ...။
လောကကြီးကအ၇ာ၇ာအားလုံး Ok နေတယ်ဆို၇င်လဲ
Posted in Photography by Zay Yar Haling |0comments
Posted in Photo Essay by Zay Yar Haling |0comments
World's oldest photo sold to library
The work has been declaredaFrench national treasure
The world's oldest known photograph has been sold to the French National Library for 450,000 euros ($392,000).
The image of an engraving depictingaman leadingahorse was made in 1825 by Nicephore Niepce, who inventedatechnique known as heliogravure.
The French Government declared the work - the date of which is confirmed inaletter from Niepce - to beanational treasure meaning it must stay in the country. Our correspondent says this kept the price down and allowed the library to make the acquisition.
By coatingacopper plate withakind of light-sensitive bitumen, Niepce found he could takeanegative imprint of an image and use that to createanew picture - the first photograph.
He used the method to makeacopy of the Flemish 17th Century print, andaletter to his son Isidore shows it is the earliest surviving testament to his breakthrough.
Philippe Garner, who was in charge of the sale for the auctioneers Sothebys, in Paris said: "If you look at this, it might not first be recognised as what we call todayaphotograph.
"And in fact, it is printed ink on paper.
"The crucial stage in creating this plate, however, is the etching by the action of light on light-sensitive chemicals ofametal plate which is then used as the printing plate."
The photograph was part of the collection of the Paris-based booksellers Marie-Therese and Andre Jammes, who are revered in the photographic world for their lifelong commitment to archiving historic works.
Also on sale are early works by Hippolyte Fizeau and Jacques Louis Daguerre, the collection of 19th Century master Charles Negre, portraits of literary figures such as Colette by Laure Albin-Guillot and an album of 77 photographs by Robert Doisneau.
Posted in Knowledge by Zay Yar Haling |0comments
window7Ultimate 32-bit
ယခုမှစပြီး window7Ultimate 32-bit ကိုပိုက်ပိုက်မူးစေ့မတ်စေ့မျှမကုန်ပဲကလိမ်ကကျစ်နည်းများသုံးကာ
တ၇ဝင်ပြည့်ပြည့်ဝဝသုံးတော်မူနေပါပြီ။ ဟီ ဟီး ...။ ပျော်လိုက်တာနော်။
miscrosoft ကဆ၇ာသမားများ sorry ပါခင်ဗျာ။
Do Not Disturb :dnd (မနှောက်ယှက်ပါနှင့်)
Movie :movie (တီးထည့်လိုက်ရမလား)
On Phone :call (Ph နှင့်ပြောမယ်)
Smug :mm (မျက်ခုံးပင့်ပြီး နောက်ပြောင်ခြင်း)
Wait :wait (ခဏစောင့်ပေးပါ)
Yahooooo :yahoo ( ရှာကြည့်ပါ)
အင်္ဂလိပ် - မြန်မာ ၊ မြန်မာ - အင်္ဂလိပ်
အင်္ဂလိပ် - မြန်မာ ၊ မြန်မာ - အင်္ဂလိပ် ၂ မျိုးစလုံး အပြန်အလှန် အသုံးပြုနိုင်တဲ့...
ဘာမှကိုမလိုဘူး...5.58 MB ပဲ ရှိတဲ့ ဆော့ဝဲလ်လေးပဲလိုတာဗျာ...။
မကောင်းဘူးလား......(ဟာ..ကောင်းတာပေါ့...။) ကောင်းမှာပေါ့ အလကားရတာပဲဗျာ..နော့..။
ရပြီ ဆိုရင် run လိုက်ရုံပါပဲ...။ ဒါပေမဲ့ သူက ဖောင့်အနေနဲ့ ( ၃ )မျိုးကိုလက်ခံပြီး လုပ်တယ်ဗျာ..။
၁။ ZawGyi - One
၃။ Ayar Burmese
ဒီတော့ ညာဘက်အပေါ်မှာရှိတဲ့ အောက်စိုက်နေတဲ့ မြားလေးကိုနှိပ်ပြီး ကိုယ်လိုချင်တာ ပြောင်းလို့
ရတယ်ဗျ..။ ပြီးတော့ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ ဖောင့်ကို ရွေးပြီး သူ့ရဲ့ ဘယ်ဘက်က ဘောင်လေးမှာ ကိုယ်ကြိုက်
ရာ စာလုံးကို ရိုက်ပြီး ရှာလိုက်တာနဲ့ သူက အောက်မှာ ဘာကို ရှာမှာလဲ ဆိုပြီးအကြံပေး လမ်းပြတွေ ပေါ်
လာဦးမှာ..။ ဒီမှာကိုယ်ကြိုက်တာကို ရွေးလိုက်ရုံပါပဲ..။ကိုယ့်ဖာသာ အပြည့်ွှအစုံ ရိုက်ရင်လည်း ရိုက်ပေါ့
လေ..။ အဲ...အခု ပြောနေတာ ဖွင့်ခါစ ပုံစံနော်..။ ဒါဆိုရင် အင်္ဂလိပ်လို ပေါ်နေမှာလေ..။ ဒါကို မြန်မာလို
ပြောင်းပြီးရှာချင်တယ် ဆိုရင်တော့ ဇော်ဂျီဖောင့် အတိုင်းပါပဲ..။ Ctrl + Shit ပေါ့ဗျာ..။
အခုကျွန်တော် ပြောပြနေတာတွေ ရှုပ်ရင် ရှုပ်ဦးမယ်နော်..။ တကယ် လုပ်ကြည့်လွယ်လွယ်လေးပါ....တကယ်တကယ်..။ အဆင်ပြေပါစေဗျာ..။
ဒီကြော်ငြာကို အရမ်းကြိုက်မိပါတယ်။ ပုံကြည့်တာနဲ့ ထွေထွေထူးထူး ပြောစရာမလိုအောင်
သိသာနိုင်တဲ့ ကြော်ငြာလေးပါ။ အိုင်တီခေတ်တဲ့.. ကွန်ပြူတာတွေ၊ ဖုန်းတွေ၊ အီးမေးလ်တွေနဲ့
သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေ၊ အိမ်သူ အိမ်သား၊ ချစ်သူရည်းစားတွေကို ဆက်သွယ်ရလွယ်တဲ့ ဒီအီးခေတ်မှာ
လက်ရေးနဲ့ ရေးတဲ့ စာဆိုတာ အတော်လေးကို ရှားပါးခဲ့ပါပြီ။
အေးစက်စက် ဖန်သားပြင်ပေါ်မှာ ဖတ်ရတဲ့ စာထက်
ကိုယ်တိုင်လက်ရေးနဲ့ ဂရုတစိုက်ရေးတဲ့ စာက ပိုနွေးထွေးတယ် ဆိုတဲ့အကြောင်း..
ဝေးကွာနေတဲ့ အချိန်အတွင်းမှာ စာလေးတွေနဲ့ ပွေ့ဖက်ပါ။
မီးလောင်နေတဲ့ နေရာကို မီးသတ်ကား အမြန်ရောက်အောင် ကားနဲ့တစ်ဆင့် ပို့ပေးနေတဲ့ ပုံလေးပါ။
Fedex Express ရဲ့ အမြန်ချောပို့ ကြော်ငြာဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မြန်ဆန်ဆန် ရောက်ကြောင်း
ကြော်ငြာထားပေမဲ့ မီးသတ်ဌာနကို ကဲ့ရဲ့တယ်လို့ လူတွေ ထင်စေတဲ့ ကြော်ငြာဖြစ်တယ်။
မြန်မာပြည်မှာတော့ Fedex မရှိတဲ့ အတွက်ကြောင့်
မီးသတ်ကား အမြဲနောက်ကျမှ ရောက်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့ ခံတွင်းဟာ မလျော်မဖွတ်ဘဲ ထားတဲ့ ခြေအိတ်လို အနံ့ထွက်နေပြီလား..
Clorets ပီကေကို ၀ါးလိုက်ပါ။ လျှာကို ခြေအိတ်သဏ္ဍာန် ပြထားတဲ့
Clorets တံဆိပ် ပီကေ ကြော်ငြာလေးပါ။
ဒီကြော်ငြာလေးလည်း ရီရတာပဲ။ bra ကြော်ငြာလို့ အတွေးကောက် မှားပြီး မရီမိဖို့ပဲလိုတယ်။
ဘောလ်ပင် ကြော်ငြာလေးပါ။ ဘယ်လောက်ကြမ်းတဲ့ အရာဝတ္ထုပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် ရေးခြစ်နိုင်ကြောင်းကိုရွတ်တွနေတဲ့အသားအရေပေါ်မှာရေးပြပြီးကြော်ငြာထားပါတယ်။
“I think pen ad is telling the ink doesn't fade away for ages.”
ဒီအတွေးလေးလည်း မှန်နိုင်တာပဲ။ တက်တူး ထိုးထားသလိုပေါ့။
မင်အရောင်က တော်ရုံမမှိန်နိုင်ဘူး ဆိုတဲ့ အကြောင်း...
ဟိုထဲပဲ ၀င်ပါရစေ။ ဒီထဲ မ၀င်ပါရစေနဲ့။
ပက်စီကိုပဲ ကြိုက်ကြောင်း ပိုက်ပုံသဏ္ဍာန် ကြည့်ပြီး ဥာဏ်မှီသလောက် ပြောကြည့်တာပါ။
Ask for More ပက်စီကြော်ငြာလေးပါ။ သံပရာရည် ညှစ်တာလေး မြင်လိုက်မိလို့
သေသွားတာတောင် ဆံပင်တွေက သန်တုန်းတဲ့.... NIVEA Hair Care ကြော်ငြာတစ်ခုပါ။
နူးညံ့လွန်းပါတယ်။ ရိတ်ထားလို့ ချောမွတ်နေတဲ့ မျက်နှာကို
ကလေးလေးက ဟိုဒင်း ယုံမှား သွားပုံရတယ်။ မုတ်ဆိတ်ရိတ်ဓား ကြော်ငြာလေးပါ။
အကောင်းဆုံး English learning website များ
ဒီ website ကတော့ အင်္ဂလိပ်စာသင်ကြားရေး နဲ့ ပတ်သက်ပြီး
ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး နံပါတ်(၁) website ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ website မှာ
အသုံးပြုသူ User တွေ အနေနဲ့။ ကိုယ့်ရဲ့ English Grammer and Vocabulary
Skill တွေကို Interactive Tests တွေနဲ့ စစ်ဆေးကြည့်လို့ ရပါတယ်။ ဒါ့အပြင်
Register လုပ်ပြီး User log-in နဲ့ ၀င် မယ်ဆိုရင်လည်း သူ့ဆီက အခမဲ့ Email
Test တွေ ရယူ ဖြေဆိုပြီး ကိုယ့်ရဲ့ရမှတ်ကိုလည်း ပြန်လည်ကြည့်ရှုလို့ ရပါ
တယ်။ ဒီ websites က သူ့ရဲ့ Tests တွေကို အပတ်စဉ် Update လုပ်ပေးပါတယ်။
သူကတော့ ဒုတိယအကောင်းဆုံး Learning English websites ပါ။ ဒီ
website မှာတော့ လူငယ်ကြိုက် လွတ်လပ်စွာ English သင်ကြားတဲ့ပုံစံကို
ရယူနိုင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ကိုယ့်ရဲ့ကဗျာလေးတွေ၊ စာလေးတွေကို website
ပေါ်မှာပြန်ပြီး Upload လုပ်လို့ရသလို ကိုယ့်ရဲ့ ထင်မြင်ချက်
(Comments)တွေကိုလည်း website ပေါ်မှာ ရေးလို့ရပါတယ်။ ဒါ့အပြင်
အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မေးမြန်းတဲ့မေးခွန်းပြသနာတွေကိုလည်း အခမဲ့ email
ဒီ website မှာတော့ အခမဲ့သင်ခန်းစာတွေ၊ English နဲ့ ပတ်သက်တဲ့
ebook တွေကို download ရယူ နိုင်ပါတယ်။
ဒီ website ကတော့ အင်္ဂလိပ်စာကို second language အဖြစ် လေ့လာတဲ့
သူတွေအတွက် အထူး လွှင့်တင်ထားတဲ့ website ပါ။ အထူးသဖြင့်
english ဘာသာ mother language မဟုတ်တဲ့ လေ့လာသူများအတွက်
သင့်လျော်ပါတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်း မျိုးစုံထဲက ကိုယ်နဲ့ကိုက်ညီမယ့်
ဒီ website မှာတော့ Grammer, vocabulary, verbs and speaking
games တွေနဲ့ english newsletter (သတင်းလွှာ)တွေကို အခမဲ့ရယူနိုင်ပါတယ်။
ဒီ website ကတော့ နာမည်အတိုင်း မတူညီတဲ့ ဘာသာစကား နှစ်ခုကို
မတူညီတဲ့ လူနှစ်ယောက် သင်ယူ တဲ့ နေရာမှာ ကူညီပေးပါတယ်။ ဥပမာ -
ပြင်သစ်စကား သင်နေတဲ့ english speaker တစ်ယောက်နဲ့ အင်္ဂလိပ် စကားသင်နေတဲ့
french speaker တစ်ယောက် အပြန် အလှန် သင်ကြားတဲ့ပုံစံမျိုးပါ။
ဒီ website ကိုတော့ the rose of york english college က
လွှင့်တင်ထားတာပါ။ ဒီ site မှာ user တွေ အနေနဲ့ general english, business
english, academic english, english speaking စတာတွေကို အခမဲ့သင်ကြား
ဒီ site မှာတော့ user တွေကိုယ်တိုင် ပါဝင် (participate)
နိုင်တဲ့ program တွေနဲ့ အင်္ဂလိပ်ဘာသာကို သင်ကြားပေးထားပါတယ်။ ဥပမာ -
one stop english perfection program မျိုးတွေနဲ့ပါ။
ဒီ website ကတော့ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာရှိတဲ့ english
ဘာသာလေ့လာသူတွေအနေနဲ့ Highest quality english language resources တွေကို
ရရှိကြစေနိုင်ဖို့ လွှင့် တင်ထားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ထူးခြားချက်က
မျက်စိမှုန်သူများနှင့် အသက်အရွယ် ကြီးရင့်သူတွေ အတွက်ပါ လေ့လာနိုင်ဖုိ့
font size အကြီး အသေးကို အဆင့် ၄ ဆင့်အထိ ပြောင်းလို့ရပါတယ်။ အင်တာနက်
ပေါ်က စာလုံးသေးသေးလေးတွေကို ဖတ်ရတာ စိတ် ပျက်နေသူတွေအတွက်
ဒီ website မှာတော့ english ဘာသာလေ့လာ ရာမှာ အထောက်အကူပြု
quotes တွေ၊ films တွေ၊ music file တွေကို အခမဲ့ download
ကဒါ၇ပင် (SORRY ကဒါ၇ကိုဘယ်လို၇ိုက်၇မှန်းမသိဘူးဗျာ၊
ေ၇ွှဘုံထင်၇ .... တဲ့။
တစ်ဂိုးတို့ ခေတ်တုံးကတော့ တစ်ကယ်ပဲ
ကျွန်တော်တို့ ခေတ်မှာတော့ဒီလောက်နဲ့ မ၇တော့ဘူးထင်တယ်ဗျာ၊
ဒါကြောင့်ကိုယ်သဘောနဲ့ ကိုယ်ဝီစကီတစ်ပိုင်းလုပ်လိုက်တယ်ဗျာ။ )
ေ၇ွှဘုံထင်၇ .... ဟ ဟ ဟ။
INTERNET ကကျွန်တော်၇ဲ့ အနုပညာအပိုင်းအစတစ်ခုပါ၊
ချစ်တဲ့သူကတော့ ကျွန်တော်၇ဲ့ မ၇ှိမဖြစ်လိုအပ်သူပေါ့၊
အမယ်မင်း ... ပြော၇အုံးမယ်၊
အဲ ဌဲ ဌဲ ....။
ဟီး ။ ဘာ၇ယ်မဟုတ်ပါဘူးဗျာ၊
ချစ်သူကိုကလိလိုက်တာ ... ဟဲဟဲ။
ဖတ်ပေးကြလို့...၊
P.S သယ်၇င်းတို့ေ၇. sorry ဗျာ။ ကဗျာဆ၇ာနာမည်မှားသွားလို့ ၊
ဖတ်ဘူးခဲ့ တာကြာပြီဆိုတော့လဲဒီလောက်တော့၇ှိမှာပေါ့။ ဟီး .....။
တကယ်က Omar Khayyamေ၇းတာဗျ။ ဟဲဟဲ။ sorry နော်။
Posted in Poem by Zay Yar Haling |0comments
Driver Auto searching software
အောက်ကပေးထားတဲ့ဆော့ဝဲလ်လေးတွေကတော့ကတော့ ကွန်ပျူတာဝယ်လို့ driver cd မပါတာမျိုး .. Driver cd ပျောက်သွားတာမျိုး .. ပျက်ဆီးသွား တာမျိုးတွေပေါ့ .. ကွန်ပျူတာ အတွက် လိုအပ်နေတဲ့ driver တွေအတွက် download လုပ်ဖို့ လင့်တွေ ချပေးပါတယ် .. လိုအပ်နေတဲ့ driver တွေကို လိုက်ပြီးတော့ ရှာပေး ပါတယ်။
drivermax5.rar, 3.1 MB
DGPro-8.0.rar, 9.5 MB
Best Wallpaper site [Interfacelift.com]
ကျွန်တော် ဒီရက်ပိုင်းက ရထားတဲ့ wall paper တွေ အလကားပေးတဲ့ ဆိုက်တစ်ခုကို ပြန်ပြီး ရှယ်ပေးချင်ပါတယ်။ Interfacelift.com ဆိုတဲ့ ဆိုက်မှာ wallpaper လှလှလေးတွေ ကို အလကား ဒေါင်းလုပ်ဆွဲယူလို့ရပါတယ်။ ကျွန်တော် သဘောအကျဆုံးနဲ့ အကောင်းဆုံး တစ်ခုကတော့ screen resolution အစုံရှိတာပါ။ ရနိုင်တဲ့ resolution တွေက
Full Screen 5:4
Mobiles (PSP, iPhone, Cellphone)
အဲဒါအပြင် iPhone အတွက်သီးသန့် App ကိုလဲ iTunes ကနေ ယူလို့ရပါတယ်။
Click here to visit interfacelift.com
ဆရာအော်ပီကျယ် ရဲ. ကာတွန်းလေး ဖတ်ပြီးချိန်မှာ ...ရယ် ရ မလို ...ငို ရ မ လို....
ကိုယ် ကိုယ် တိုင် ....................... ဆိုတဲ့လှောင်အိမ် ထဲ က..... ဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့
ငှက်ပျောသီး ကို....မစားရဲ.တဲ့...... မျောက် တကောင် ဖြစ်နေခဲ့.......
သူ့ ဥပမာက လူတွေကို တော်တော် ထိရောက်မှုပေးတယ် အစွဲတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ပေါ့
သူငယ်ချင်းများ အစွဲတွေကို သေချာ မြင်တတ်ပါစေဗျာ
Posted in Myanmar Cartoon by Zay Yar Haling |0comments
သတိရခြင်း - ရန်ကုန်
ငါ့စိတ် အကိုင်းအဖျားလေးပေါ် ရန်ကုန်မြို့ကြီးလာနားတော့
မြို့ထဲလမ်းမတွေက အမှတ်တရ သိမ်းထုတ်ထားဖို့ ရှည်လျား
မိုးရေထဲ လ်ိမ်လိမ်မာမာလေး နှစ်မြုပ်နေမယ့် မြို့ကြီးပေါ့
ငါ့ရဲ့ အိမ်လွမ်းနာမှာ မင်းက ဒဏ်ရာအစစ်ပါ ရန်ကုန်
ရန်ကုန်ရေ... မင်းဆီမှာ ကျန်ခဲ့တဲ့ ငါ့အိမ်မက်တွေ
ပန်းဆိုးတန်း၊ အနော်ရထာ၊ ၂၆လမ်းတွေပေါ်
ငါ့စိတ်ကလေးပဲ လွှတ်လိုက်ပါရဲ့ ရန်ကုန်ရယ်
ဒီကဗျာလေးကိုေ၇းတဲ့သူက စိုင်းလောဝ်ပိန်း တဲ့၊
၇င်ခုန်သံခြင်းနီးစပ်တယ်လို့ ခံစားမိလို့ share လိုက်ပါတယ်။
အင်တာနက်ပေါ်တွင် ဓါတ်ပုံတွေကို ပြင်မယ်ဆိုရင် ...
အင်တာနက်ပေါ်တွင် ဓါတ်ပုံတွေကို ပြင်မယ်ဆိုရင် အောက်ပါဆိုဒ်များကိုသွားကြည့်ပါ။
29. Imagic Photo Enhance
Working 100% Kaspersky KIS.KAV 2010 (forever license) & All new Kaspersky keys, Updated Daily
Working 100%(forever license)
All new Kaspersky keys, Updated Daily
ကျွန်တော်တို့ နေ့ စဉ်နီးပါးသုံးဆွဲနေတဲ့ social wesite တစ်ခု၇ှိပါတယ်။
သယ်၇င်းတို့ သိကြပြီးဖြစ်မှာပါ။ အဲဒါကတော့ Facebook ပါ။
Friedster, zorpia အစ၇ှိသဖြင့်ပေါ့လေ...။Facebook ကဲ့သို့ social wesite တွေတော်တော်များများ၇ှိပါတယ်။ အသုံးလဲပြုကြပါတယ်။
အဲဒီ site တွေထဲကမှ Facebook ၇ဲ့ တည်ထောင်သူလဲဖြစ်၊ လက်၇ှိ Facebook မှာ
CEO တာဝန်ကိုယူထားသူလဲဖြစ်သူ Mark Elliot Zuckerberg ဆိုတဲ့
ကျွန်တော်တို့ ဟာ Facebook ကိုသုံးနေ၇င်း၊
Facebook ကိုတည်ထောင်ခဲ့သူ၇ဲ့ 
ဗဟုသုတလေးလဲ၇တာပေါ့ဗျာ ... ဟုတ်ဘူးလား။ ဖတ်ကြည့်လိုက်ကြအုံးပါနော်။
အမည် ............. Mark Elliot Zuckerberg
မွေးဖွား ............ ၁၉၈၄၊ မေလ၊ ၁၄၇က်။
ဇာတိ .............. ဝှိုက်ပလိန်း၊ နယူးယောက်၊ အမေ၇ိကန်ပြည်တောင်စု။
ပိုင်ဆိုင်မှု ......... US$ 1.5 Billion ( 2008 )
ပညာေ၇း ........ Phillips Exeter Academy, Harvard University
ဘာသာ ........... ဘာသာမဲ့
Time Magazine ကေ၇ွးချယ်ထားတဲ့အလွှမ်းမိုးနိုင်ဆုံးလူ ၁၀၁ ဦးမှာ
သူ့ ၇ဲ့ အဆင့်က ၅၂ ပါ။
ဂျူးလူမျိုးမိခင်ဖခင်တို့ ကမွေးဖွားခဲ့တဲ့ အမေ၇ိကန်ဖွားဂျူးလူမျိုးတစ်ဦးပါ။
သူ့ မိဘတွေကတော့ သွားဆ၇ာဝန်နဲ့ သမားတော်ကြီးတွေပါ။
အထက်တန်းအောင်တော့ Microsoft ကသူ့ ကိုခေါ်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့ သူဟာလက်မခံခဲ့ပဲ
Harvard University ကိုပဲသွားခဲ့ပါတယ်။
၂၀၀၄၊ ဖေဖေါ်ဝါ၇ီမှာ Facebook ကိုသူ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့ 
စစခြင်းမှာတော့ Harvard University ကျောင်းသားအခြင်းခြင်းအပြန်အလှန်
ဒါပေမဲ့ စတန်းဖို့ ဒ်၊ ဒါးမောက်၊ ကိုလံဘီယာ၊ ကော်နယ်လ်၊ ယေးလ် အစ၇ှိတဲ့ University
တွေကိုပါပြန့် နှံသွားပြီး ယနေ့ အချိန်မှာတော့နိုင်ငံတကာမှ လူကြီးလူငယ်မေ၇ွးအသုံးပြုနေသော၊ အောင်မြင်နေတဲ့ social website တစ်ခုဖြစ်လာတော့ပါတယ်။
ပထမဆုံး Facebook office လေးကို ကာလီဖိုးနီးယားပြည်နယ်၊
Facebook ဟာအခုဆို၇င် ဒေါ်လာ ၁၅ ဘီလီယံတန်ကြေး၇ှိနေပါပြီ။
Facebook ၇ဲ့ ၇ှယ်၇ာ ၁.၆ % ကို Microsoft က
ဒေါ်လာသန်း ၂၄၀ နဲ့ ဝယ်ယူထားပါတယ်။
Forbes Magazine ၇ဲ့ ၂၀၀၈ ခုနှစ်ဖေါ်ပြမှုအ၇ သူဟာ အမေ၇ိကန်နိုင်ငံ၇ဲ့ 
အချမ်းသာဆုံးလူ ၄၀၀ ထဲမှာအငယ်ဆုံးဖြစ်ပြီး၊
Mark Elliot Zuckerberg ၇ဲ့ ပုံ၇ိပ်တစ်ချို့ ကိုဖေါ်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
အဖြူအမဲ ဓါတ်ပုံလေးကို ရောင်စုံဓါတ်ပုံပြောင်းမယ်
Abstract Watercolor Wallpaper
Prepare4X'mas @ Orchard
Kids Playing with Candles
One of the coffee shops’ chairs in Singapore
Japanese dance by Singaporean girls
One of Boat Quay view
စံ-ဇာဏီဘို ၂၀၁၀ တစ်နှစ်စာ ဟောစတမ်း
Noisy street performer
Things to do on MRT
Underground musical performer
Super Import Nights (The Ultimate Motorshow)
Keeping the Singapore River clean
Suicide Bomber in Sg
ေ၇ှးေ၇ှးတုံးက Sg. ၁
ေ၇ှးေ၇ှးတုံးက Sg. ၂
ေ၇ှးေ၇ှးတုံးက Sg. ၃
Photo Art By Joël Pèlerin
On line photo school.
Working 100% Kaspersky KIS.KAV 2010 (forever licen...